नेपालको सरकार त घृ*णा गर्न पनि लायक भएन , प्रसंशाको त कुरै छोडौं , सम्झँदा पनि क*हाली लागेर आउँछ । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
नेपालको सरकार त घृ*णा गर्न पनि लायक भएन , प्रसंशाको त कुरै छोडौं , सम्झँदा पनि क*हाली लागेर आउँछ ।
इतिहासमा यस्तो महासंकट सायदै आयो होला । भविस्यमा आउने कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । कतै पृथ्वी नै प्रलय हुने होकि, मानव सभ्यता नै समाप्त हुने होकि भनेर विश्व समुदाय चिन्ता डुबेको छ । यो बिषम परिस्थितिलाई कसरी समाधान गर्ने विश्वका सबै देशका सरकार प्रमुखहरु कति धेरै चिन्तित छन् ।
नागरिकलाई कसरी पाल्ने, अर्थतन्त्र कसरी सम्हाल्ने र कोरोनाको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हरेक देशका सरकारहरु जुटिसकेका छन् । कयौं देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बर्तमानको पीडा सहन नसकेर आफ्ना जनताको घरघरमा पुगेर सान्त्वना दिइरहेका छन् ।
एक अध्ययन अनुसार, अहिलेसम्म विश्वमा २ अर्ब मानिसले रोजगार गुमाईसकेका छन् । २० हजार अर्ब डलर बराबरको विश्वले आर्थिक क्षति ब्यहोरिसकेको छ । हरेक देशका सरकार प्रमुखहरु यिनै घरघोर समस्यालाई समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर २४ घण्टा खटिएका छन् ।
तर, नेपालको सरकार त घृणा गर्न पनि लायक भएन । प्रसंशाको त कुरै छोडौं । सम्झँदा पनि कहाली लागेर आउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठन र भारतको इसारामा लकडाउन लगाइदियो, अनि आँफै भित्ता फोर्यो । आफ्नैसंग भिड्यो, आँफै सत्तामा बस्यो, अनि सत्ताभित्रकै आफ्नै सहकर्मीसंग जुहारी खेल्यो । भिड्नका लागि शत्रु पनि नचाहिने । आफ्नै मित्रलाई शत्रु घोषणा गरेर भिडिदिने ।
लकडाउनसंगै हजार जिम्मेवारी सरकारका हुन्छन् भन्ने यिनको सद्बुद्धि त पलाएन नै, कोरोनाको यो कहर भित्र राजनीति कहर कसरी मिसाउन सकेको होला ? यस्तो दुखको समयमा सरकारमा बस्नेहरु रकम लुट्न मात्र बसेका छन्, मानौं यहि लुट्ने मौका हो, कोरोना अघि सकेजति लुट्नुपर्छ भन्ने मात्र जानेका पात्रहरुले सरकार चलाएका छन् ।
अब त यिनले लकडाउन लगाएको आफ्नो सुरक्षा का लागि रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन अरु आधार खोज्न पर्छ र ? जति लकडाउन लम्ब्यायो उति, सरकारको अबधी लम्बिने खेल यिनले जनतालाई छर्लंग देखाईदिए । लकडाउन लगाएर, सरकार भित्र जुहारी खेल्यो । न देशको चिन्ता, न नागरिकप्रति जिम्मेवारी न आफ्नो कर्तब्य । यो हदसम्मको गैरजिम्मेवार अहिले संसारमा कुनै सरकार होला ?
२०७२ सालमा संविधान बन्यो । अनि चुनाव भयो । एकथरि, जनतालाई लागेको थियो, अब त केहि राजनीति स्थायित्व होला । ढुक्कले ब्यापार गर्न पाइएला । खेती गरिएला, बजारमा लगेर बेचेर पैसा कमाइएला । पढ्न पाइएला । जागिर मिल्ला ।
केहि न केहि सुबिधाका दिन आउला भन्ने केहि जनताले अपेक्षा राखेका थिए । तर, के थाहा ति जनतालाई यो धोका र संसारमै कहिं नभएको ‘बेइमान’ सरकार चलाउनेबाटै हुनेछ भनेर ।
लकडाउनको पीडाले भोका पेटहरु र दिनरात आँसु खसेका ति चेहराहरुले यो सरकार र यसका नेतृत्वलाई श्राप दिनेछन् । संभवतः अब कहिल्यै यो सरकारका हरेक पात्रलाई ति सुत्केरी आमाहरुका कुपोषण कोखहरुले कहिल्यै माफी दिने छैनन् । यो सरकारलाई कहिल्यै माफ गर्ने छैनन् । यो सरकारले माफ पाउने छैन ।
Previous बामदेम गौतम प्रम हुन सक्ने हल्ला सुने सँगै अब रबी र ज्ञानेन्द्रहरु आउँनै पर्छ भन्दै ज्वालाले लेखिन यस्तो!
Next अन्लाईन कक्षा के का लागि म’न्त्री ज्यु ? – एक नारायण पौडेल